Mogadishu Journal » 2021 » September » 5
//September 5, 2021
Brazil vs Argentina ayaa la hakiyay ka dib markii saraakiisha caafimaadka ay joojiyeen
Ciyaartii Brazil ee isreebreebka Koobka Adduunka ee Argentina ayaa la hakiyay ka dib markii mas'uuliyiinta caafimaadka iyo booliiska Brazil ay galeen garoonka ciyaarta si ay u xiraan afar ciyaartooy oo reer Argentine ah oo ku guuldareystay inay karantiil sameeyaan ka dib markii...
Ahmad Massoud, head of NRF, says he welcomes proposals for a negotiated settlement to end fighting in Panjshir Valley. 6 Sep 2021 The leader of the Afghan opposition group resisting Taliban forces in the Panjshir Valley north of Kabul has said he welcomed proposals from religious...
(Akhriso) Qoraal xasaasi ah oo Fahad Yaasiin u diray Madaxweyne Farmaajo
Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin ayaa warqad u diray Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullahi Farmaajo, taasoo uu uga dalbanayo inuu shir guddoominayo kulanka golaha amniga qaranka si uu ugu soo bandhigo warbixin la xariirta kiiska Ikraan Tahliil. Allbanaadir Online ayaa heshay nuqul...
DEG DEG: Fahad Yaasiin oo jawaab ka bixiyey amarkii ka soo baxay Raisul Wasaare Rooble
Taliyaha hay’adda Nabad-Sugidda Somalia Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa jawaab ka bixiyey amarkii ra’iisul wasaare Rooble uu uga dalbaday inuu 48 saac gudahood ku keeno warbixin ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo haatan ah kiis xiisad weyn ka abuuray dalka. Fahad Yaasiin...
Wararkii ugu dambeeyey dalka Guinea & Madaxweyne Alpha Conde oo la qabtay (Sawirro)
Ciidamo ka tirsan Millatariga dalka Guinea ayaa sheegay iney Afgembi xilkii kaga tuureen Madaxweynihii dalkaasi Mr. Alpha Conde, waxaana lagu soo warramayaa in ciidamadu gacanta ku dhigeen Madaxweynaha. Wararka ayaa sheegaya in wali ay ka socdaan xabado xoogan oo la is...
Raisul Wasaare Rooble oo Balan qaad u sameeyay Qoyska Ikraan Tahliil Baaqna diray (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta la kulmay qoyska Ikraan Tahliil Faarax oo ay wehliyaan Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Cabdullaahi iyo xubno ka tirsan ehelada Ikraan. Rooble ayaans Hooyasa Ikraan Tahliil iyo xubnaha kale ee qoyska la...
Gudoomiyaha Aqalka Sare iyo Mahdi Guuleed oo Heshiis rasmi ah gaaray (Akhriso)
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Raisul Wasaare kuxigeenka dalka Mahdi Guuleed ayaa ka heshiiyay khilaafkii u dhaxeeyay Siyaasiyiinta gobolada Waqooyi ay kala hogaaminayeen. Qoraal wadajir ah ay soo saareen labada garab ayey ku...